Review Máy rửa Mặt Halio có tốt không ( Đánh giá chi tiết) | Muasalebang - Muasalebang
Máy móc 0 lượt xem 04/05/2022
Đang Đọc: Review Máy rửa Mặt Halio có tốt không ( Đánh giá chi tiết) | Muasalebang in Muasalebang
Yiziphi izinzuzo ezivelele ze-Halio Facial Washer mayelana nedizayini nezici ezihambisana nayo? Umkhiqizo uvela kuliphi izwe futhi uthengiswa ngamalini?
Abaningi benu bayazibuza ukuthi ukungezwa kokugeza ubuso be-silicone kuzosiza inqubo yokunakekelwa kwesikhumba iphumelele noma cha. Impendulo iwukuthi ukugeza ubuso kunikeza izinzuzo eziningi kunalokho ocabanga ngakho ekugezeni ukungcola nokusiza isikhumba ukuba siqine.
Omunye wemikhiqizo efunwa kakhulu yokugeza ubuso namuhla wuhlobo lweHalio. Kulesi sihloko, sizobuyekeza umkhiqizo Umshini wokuwasha ubuso beHalio futhi sikusize ukhethe umkhiqizo olungile!
1 Uke wasebenzisa umshini wokuwasha?
1.1 Ukusebenzisa umshini wokuwasha kuwukumosha?
1.2 Umshini wokuhlanza osebenzayo
1.3 Isekela ukuqiniswa kwesikhumba nokuphakamisa i-massage
2 Funda nge-Halio .imikhiqizo yokugeza ubuso
2.1 Umsuka we-Halio .umshini wokuwasha ubuso
2.2 Uhlolojikelele lomkhiqizo we-Halio
3 Ukuhlola okuningiliziwe: Ingabe i-Halio inhle noma cha?
3.1 Idizayini yamamodeli amabili we-Halio
3.1.1 I-Halio Facial Cleansing: idizayini ephakeme kakhulu
3.1.2 I-Halio Sensitive Facial Cleansing: yakhelwe isikhumba esibucayi
3.2 Ngabe isebenza kanjani le mishini emibili?
3.2.1 I-Halio Facial Cleansing: hlanza ngezindlela eziyi-14
3.2.2 I-Halio Sensitive Facial Cleansing: ukuhlanza okujulile, okumnene
4 Iluphi uhlobo lwesikhumba olufanele isihlanzi sobuso se-Halio?
5 Kubiza malini ukugeza ubuso be-Halio?
6 Imiyalo yokusebenzisa umshini osebenzayo wokugeza ubuso we-Halio
7 Amanye amanothi okufanele uwakhumbule lapho usebenzisa umshini wokugeza ubuso we-Halio
8 Amathiphu wokukhetha ukugeza ubuso be-Halio okungcono kakhulu
8.1 Imuphi umugqa womkhiqizo we-Halio okufanele ngikhethe ukuwuthenga?
8.2 Okubalulekile ukuthenga izimpahla esitolo “seMall”.
Uke wasebenzisa umshini wokuwasha?
Ukusebenzisa umshini wokuwasha kuwukumosha?
Ukugeza ubuso bakho ngesandla noma ngokugeza ubuso kulethe umphumela omuhle kakhulu wokukhipha ukungcola, ngakho kungani kudingekile ukuhlomisa umshini wokuwasha obizayo ongawuzwa umphumela? Ngaphezu kwalokho, lokhu kwenza inqubo yokugeza nsuku zonke ibe yinkimbinkimbi futhi idle isikhathi.
Xem Thêm Có Nên Mua Máy Hút Bụi Mini Cầm Tay Không? Top 3 Sản Phẩm Tốt | Muasalebang
Lowo umcabango ovamile wentsha eningi namuhla lapho ibhekene nesinqumo sokuthi ikhethe umugqa omusha wemishini yokunakekela isikhumba ewukugeza ubuso noma cha. Nokho, umkhiqizo ngamunye unesizathu sawo sokuba khona, futhi nini umshini wokuwasha Uma ikhethwe inombolo enkulu yabasebenzisi, ngokuqinisekile yenza lokho eyikho Ukugeza ubuso okuvamile akukwazi ukuhlangana.
Umshini wokuhlanza osebenzayo
Oda kuwebhu yangempela
Kulungile, ngokusho kocwaningo, umphumela wokuhlanza wokugeza ubuso uvame ukusebenza izikhathi eziningi futhi ngokushesha kunokuhlanza okuvamile. Imodi yokudlidliza ingakhipha ukungcola ekujuleni kwezimbotshana kuyilapho ukugeza ubuso bakho ngezandla kungakwazi.
Vele ushibilikise kahle idivayisi ebusweni, amaseli esikhumba afile nawo ayawashwa, asuse kahle i-sebum ukusiza isikhumba sihlanzeke ngokujulile futhi sinempilo.
Isekela ukuqiniswa kwesikhumba nokuphakamisa i-massage
Ikakhulukazi, imodi yokudlidliza yomkhiqizo nayo iletha izinzuzo zokuthuthukisa ukujikeleza kwegazi kanye ne-metabolism ngaphansi kwesikhumba. Le ndlela ayisizi nje ukuqinisa izimbotshana kodwa futhi yenza isikhumba siqine futhi sinwebeka.
Eminye imigqa yomkhiqizo wokuhlanza ubuso yezinga eliphezulu iphinde ibe nomthelela wokuvuselela ubuso uma ihlanganiswe nemisebenzi eqondisiwe, okusiza abasebenzisi ukuthi bathole ukuzizwisa okungcono kakhulu.
Funda nge-Halio .imikhiqizo yokugeza ubuso
Umsuka we-Halio .umshini wokuwasha ubuso
Umkhiqizo Umshini wokuwasha ubuso beHalio ngaphansi komkhiqizo we-Halio Sonic we eMelika yethulwe ngo-2017. Kodwa-ke, emkhiqizweni uzobona amagama athi “Made in China” ngoba ikhiqizwa ezimbonini zaseChina. China ukusindisa izindleko. Kodwa futhi ngenxa yokucubungula izindleko eziphansi e-China, kwenza i-Halio ibe nokuncintisana kakhulu emakethe.
Ngaphezu kwalokho, isici esikhethekile somkhiqizo sisekusetshenzisweni kobuchwepheshe obukhethekile be-Sonic Cleansing sonic vibration obususa ukungcola esikhumbeni futhi obusekela ukuphakanyiswa kwesikhumba ngokuphindwe ka-10 ngempumelelo kuneminye imikhiqizo imikhiqizo etholakala emakethe okwamanje.
Ngokwentengo, cishe i-1/6 yentengo yomshini wokuwasha ophezulu, kodwa ikhwalithi yinhle kakhulu, iletha ukwaneliseka okuphezulu kubasebenzisi. Cabanga ngakho, phambi kwedivayisi yesimanjemanje eletha ukusebenza okuvelele futhi ithengiswa ngentengo efinyeleleka kakhulu, ethengekayo kubasebenzisi abaningi, ubani ongayithandi?
Xem Thêm Review Top 9 máy massage, máy rửa mặt tốt bán chạy nhất 2022 | Muasalebang
Uhlolojikelele lomkhiqizo we-Halio
Igama lomkhiqizo: I-Halio Cleansing
Igama Brand: Halio Sonic
Inzuzo enkulu: ubuchwepheshe be-Sonic Cleansing be-sonic obukhethekile buhlanza isikhumba izikhathi eziyi-10 futhi busekela ukuqiniswa kwesikhumba nokuphakamisa.
Imigqa yomkhiqizo: I-Halio Facial Cleansing, i-Halio Sensitive Facial Cleansing
Inani: 550,000 VND – 700,000 VND
Ukuhlola okuningiliziwe: Ingabe i-Halio inhle noma cha?
Ukuze abafundi benze ukukhetha okunembe kakhudlwana futhi kulula, ulwazi olulandelayo lunikeza nokuphawula emigqeni emibili yomkhiqizo. umshini wokuwasha oyinhloko we-brand Halio iqukethe: Ukuhlanza ubuso beHalio futhi Ukuhlanza Ubuso Okuzwelayo kwe-Halio. Ngokulandelayo:
Idizayini yamamodeli amabili we-Halio
I-Halio Facial Cleansing: idizayini ephakeme kakhulu
Usayizi ohlangene 13.5cm x 10cm x 4.5cm futhi unesisindo esingamagremu angu-200, uzwakala uqinile uma ubamba. Ikhanda lebhulashi lithatha cishe u-40% wendawo yobuso bangaphambili ngomklamo wamafayili e-silicon anosayizi abakhulu nabangamagagasi ukuze kube lula ukuthintana namaphoyinti angular ebusweni.
Ukuhlanza ubuso beHalio
Ngemuva, imicu ye-silicone inokufakwa okufanayo njengengaphambili kodwa inomklamo ofanayo owengeziwe wokusebenzela umsebenzi wokubhucunga, isekela ukuphakamisa ubuso ukuze imisoco imunceke ngokushesha. Abasebenzisi bangaqinisekiswa ngokuphelele ngekhwalithi ye-silicone uma isetshenziswe isikhathi eside nesici se-antibacterial.
Ikakhulukazi, idizayini yokushaja enekhava ngaphansi iyivumela ukuthi ithinte amanzi ngokukhululeka ngaphandle kokukhathazeka ngomonakalo. I-Halio Facial Cleansing line ihlanganisa imibala emi-5 eyinhloko: epinki emnyama, epinki ekhanyayo, eluhlaza okwesibhakabhaka, ephuzi kanye nempunga.
I-Halio Sensitive Facial Cleansing: yakhelwe isikhumba esibucayi
Idizayini ye-Halio Sensitive Facial cleanser inguqulo yakamuva futhi kuthiwa ifaneleka kakhulu esikhumbeni esibucayi. Usayizi ojwayelekile womkhiqizo ngu-5.5cm x 7.5cm x 8.5cm, onesisindo esingama-102.8grams amancane futhi alula kune-Halio Facial Cleansing.
Umshini Wokuhlanza Ubuso Obucayi be-Halio
Umehluko omkhulu emkhiqizweni wukuthi kukhona inkinobho eyodwa kuphela yamandla yokulungisa, indawo yokushaja ngaphansi kwesisekelo ayinakho ikhava kodwa isaqinisekisa ukumelana kwamanzi okulungile. Umkhiqizo unesici sokuhlanza esijulile, sisekela ukukhishwa kwamangqamuzana afile futhi uphakamisa ngokuphumelelayo imisipha. Nokho, imibala abasebenzisi abangakhetha kuyo ilinganiselwe ngandlela thize uma kufakwe imibala emi-2 kuphela, i-baby pink kanye ne-Mint blue.
Ngabe isebenza kanjani le mishini emibili?
I-Halio Facial Cleansing: hlanza ngezindlela eziyi-14
Lapho inkinobho yamandla ivuliwe, indlela yomshini yokudlidliza yomsindo womshini ithinta ngokuqondile isikhumba futhi yenza isikhumba sinyakaze ngokushesha, sishukumise ukunyakaza kokungcola ngaphakathi ngaphakathi kuya ngaphandle ngokushesha nangempumelelo kakhudlwana. Ngamanye amazwi, isikhumba kokubili sihlanzwa futhi sibhucungwa ngokuphumelelayo esikhundleni sokusebenzisa ukugeza ubuso okusebenzisa amandla angokwenyama, okwenza isikhumba sibe nengozi enkulu yokulimala futhi singahlanzeki ngokuphumelelayo.
Ikakhulukazi, abasebenzisi banezindlela zokudlidliza ezifika kweziyi-14 ukuze bazilungise ukuze zifanele isikhumba sabo. Idivayisi yakhelwe ngokusebenzisa amandla aphansi, ukushajwa okukodwa kuphela okungahlala izinyanga ezi-4 kamuva.
I-Halio Sensitive Facial Cleansing: ukuhlanza okujulile, okumnene
Ngaphezu kokuba nezinzuzo ze Umshini Wokuhlanza Ubuso beHalio, amandla okuhlanza e-Halio Sensitive Facial Cleansing ayaziswa nakakhulu lapho efinyelela ukushaya kwenhliziyo okungafika izikhathi ezingu-6,000 ngomzuzu. Ikakhulukazi, idivayisi izonqamula amandla ngokuzenzakalelayo ngemva kwemizuzu engu-2 ukuze ikwazise kokubili ukuthi sekuyisikhathi esanele sokuhlanza ubuso bakho ngaphandle kokuthinta isikhumba.
Le ndlela futhi iwusizo kakhulu ekongeni ibhethri kubasebenzisi lapho ngephutha bakhohlwe ukucisha idivayisi ngemva kokusetshenziswa. Umshini unamamodi okulungisa angu-3, ​​alungele ukusetshenziswa ngokushesha kulabo abanesikhumba esibucayi kakhulu.
Iluphi uhlobo lwesikhumba olufanele isihlanzi sobuso se-Halio?
Umshini wokuwasha ubuso beHalio Imigqa kuthiwa ilungele zonke izinhlobo zesikhumba. Kodwa ngesikhumba esibucayi, kungcono ukhethe umugqa Ukuhlanza Ubuso Okuzwelayo kwe-Halio ukuhlanzwa ngobumnene nangobumnene.
Qaphela ukuthi akufanele usebenzise ukugeza ubuso isikhathi eside (ngaphansi kwemizuzu emi-2) ukuze ugweme ububomvu noma ubuhlungu obuvuthayo. Ngaphezu kwalokho, esikhumbeni esibhekene nezilonda ze-acne, kufanele uyeke okwesikhashana ukusebenzisa ukugeza ubuso ukuze ugweme ukwenza isimo sibe sibi kakhulu.
Kubiza malini ukugeza ubuso be-Halio?
Amakhasimende angathola kalula futhi athenge izihlanzi zobuso ze-Halio kumapulatifomu e-e-commerce ngamanani amaphakathi ukusuka 550,000 iwinile izinkulungwane ze-dong kuya 700,000 iwinile kuye ngomugqa womkhiqizo. Uma uthenga ngesikhathi sokuthengisa noma ngamaholide onyaka, ungaba nenani elingcono noma uze nezipho eziningi ezikhangayo nokukhushulwa.
Imiyalo yokusebenzisa umshini osebenzayo wokugeza ubuso we-Halio
Ukuze bathole imiphumela emihle, abasebenzisi bayelulekwa ukuthi bageze ubuso babo ngokugeza ubuso be-Halio ngokulandelana okulandelayo:
1. Susa izimonyo
Ngemuva kosuku olude lokuchayeka endaweni yokusebenza, noma ungasebenzisi i-cushion kodwa i-sunscreen kuphela, uyalulekwa ukuthi ususe izimonyo ngaphambi kokugeza ubuso bakho ukuze uhlanze isikhumba ngempumelelo. Sebenzisa i-cotton pad namanzi ukuze uhlanze ngobumnene ubuso kusukela ebunzini, emehlweni, ekhaleni kuye esilevini nasentanyeni. I-makeup remover izosiza ukugeza inani elikhulu lokungcola, i-sebum namaseli afile akhona esikhumbeni.
2. Mmanzise ubuso bakho
Ngemva kokukhipha izimonyo, manzisa ubuso bakho ngamanzi, bese ufaka ngokuqondile okokuhlanza entendeni yesandla sakho ngamanzi amancane bese uqala ukucweba. Okulandelayo, sebenzisa isihlanzi ngokulinganayo ebusweni bakho ngezandla zakho futhi unake ukusebenzisa ngokucophelela izindawo okunzima ukuzifinyelela njengekhala, izisekelo zamehlo, i-philtrum, i-chin, njll.
3. Ukubhucunga ngokuhlanza ubuso
Vula umshini wokuwasha kumodi efanele yokudlidliza bese uqala ukutshuza ngobumnene, uhlikihle ubuso bonke ubheke ukusuka phansi ukuya phezulu futhi unake ukubhucunga ngokucophelela kakhulu okunzima ukuphatha izikhundla ukuze ususe ukungcola ngokuphumelelayo. Naka ukugeza ubuso ngokushesha, ngobumnene, ungasebenzisi amandla esikhumbeni futhi kufanele uhlikihle kuphela imizuzu engaphansi kwe-2.
4. Hlanza isikhumba ngamanzi
Ngemuva kokuthi i-massage ngomshini isiphelile, kuyadingeka ukuhlanza isikhumba ngamanzi njengenjwayelo, bese usomisa isikhumba ngobumnene ngethawula elihlanzekile.
Amanye amanothi okufanele uwakhumbule lapho usebenzisa umshini wokugeza ubuso we-Halio
– Kufanele uhlanze umshini kaningi, ikakhulukazi ngaphambi kokuthi ufune ukusebenzisa ingemuva lomshini ukubhucunga ukunakekelwa kwesikhumba. Imishini ehlanzwa ngamanzi futhi yomile izovikeleka kahle futhi ibe nempilo ende yesevisi.
Ukusebenzisa umshini kungenza isikhumba sobuso sibonakale kakhulu ngesikhathi sokuqala. Kulokhu, uma usahlanza umshini futhi uwusebenzise ngendlela efanele, ungaqiniseka. Ngoba isizathu singase silele emphumeleni womshini obangela ukuthi izikhwebu zezinduna ezifihliwe ziphushelwe phezulu ngesikhathi sokuqeda ukungcola. Ngokuzayo, induna engenhla izoshabalala ngokushesha
– Sebenzisa umshini kanye kuphela ngosuku, ukusetshenziswa ngakunye kokugeza ubuso akufanele kube ngaphezu kwemizuzu emi-2 futhi imodi eqinile akufanele ivulwe ukuze uhlanze isikhumba ngobumnene ngaphandle kokubomvu.
Umshini udinga ukuhlanzwa ngezikhathi ezithile, futhi uhlanzwe kahle ngemva kokusetshenziswa ngakunye ukugwema ukukhiqizwa kwamagciwane ayingozi esikhumbeni.
Amathiphu wokukhetha ukugeza ubuso be-Halio okungcono kakhulu
Imuphi umugqa womkhiqizo we-Halio okufanele ngikhethe ukuwuthenga?
Indlela eshesha kakhulu yokuthola impendulo yale mpendulo ukuthi abafundi badinga nje ukuzulazula ezingosini ze-e-commerce ukuze babone ukuthi yimiphi imikhiqizo ethengiswa kakhulu, ithengwa kakhulu ngabathengi. Le ndlela ingasetshenziswa futhi ekukhethweni kombala wedivayisi. Ikakhulukazi, kufanele unake ukubuyekezwa komkhiqizo ukuze ubone ukuthi odade baphawule kanjani ngemva kokuwusebenzisa ukuze uthole ulwazi olwengeziwe.
Okubalulekile ukuthenga izimpahla esitolo “seMall”.
Lapho uthenga ngokuqondile, kufanele ukhethe isitolo esinegama elihle, ngokufanayo, lapho uthenga ku-inthanethi, kufanele unikeze okuncamelayo ezitolo ze-e-commerce.inxanxathela yezitolo” noma isitolo esiyintandokazi ukuze uqinisekise ikhwalithi, gwema amanga nokulingiswa.
Ikakhulukazi, kufanele kunikezwe kuqala ukuthenga emahoreni egolide osuku, izinsuku ezikhethekile zesonto noma amaholide kanye noNyaka Omusha ukuze uthole intengo engcono kakhulu. Kwesinye isikhathi umkhiqizo ngamunye ungehliswa kakhulu kuze kufike ku-30% futhi uhambisane nezipho eziningi ezikhangayo zamakhasimende.
Kafushane, Umshini wokuwasha ubuso beHalio ingenye yemigqa yomkhiqizo enamanani aphansi kanye nekhwalithi ezinzile lapho ufuna ukunakekela kangcono isikhumba sakho. Ungasebenzisa futhi umshini ekukhipheni nasekusizeni ukuphakamisa isikhumba nsuku zonke ukuze uthole isikhumba esiqinile, esinempilo. Kodwa-ke, kubalulekile ukufunda ngokucophelela imiyalelo yokusetshenziswa kanye nokuhlanza imiyalelo ukuze uzuze imiphumela engcono kakhulu.
(Kuvakashelwe izikhathi ezingu-1,029, ukuvakasha okungu-1 namuhla)
Cách làm trà sữa matcha thạch ngon tại nhà | Muasalebang